Xog: Shirkii Madasha oo fashil ku dhammaaday | Caasimada Online
Home Warar Xog: Shirkii Madasha oo fashil ku dhammaaday
Xog: Shirkii Madasha oo fashil ku dhammaaday
Kismaayo (Caasimada Online) – Shirkii madasha wadatashiga ayaa xalay la soo gaba gabeeyayayada oo aan wax heshiis ah la gaarin.
Wax heshiis ah oo lagu gaaray shirkan ayaanan jirin, waxaa masuuliyiinta dhammaantood kuwada heshiiyeen in wada hadalka uu sii socdo. Waxaa kaloo lagu heshiiyay in shirkan kan xiga uu ka dhaco magaalada Muqdisho dhammaadka bishan janaayo.
Shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan saaxiibada Soomaaliya oo rajo weyn ka qabay in shirkan Kismaayo lagu soo afjaro heshiis buuxa oo lagu gaaray qaabkii aay noqon lahayd doorashada sanadkan 2016.
Nasiib darro waxaa halkaa ku caddaatay in masuuliyinta Soomaaliyeed ay danahooda shaqsiga ah ka hor mariyaan mar walba midda qaran, iyagoo aanan marnaba u tanaasulin rabitaanka shacaka iyo badbaadada qaranka.
Wararka gaarka ah ee Caasimada Online ay haleyso ayaa sheegaya in ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid uu baarlamanka u qorayo warqad dalbaneysa in baarlamanka iyo xukuumadda loogu kordhiyo laba sano, maadaama heshiis la gaari waayey.
Federaalku wuxuu soo jeediyey Aqalka hoose in lagu soo xulo 4.5, halka Aqalka sare ay tahay in lagu soo xulo 18 Gobol.